Warshadaha Shiinaha iyo warshado soosaarayaasha Shiinaha ee Dhex-dhexaadka ah ShiningPlast
Qalabka Poly Dhexdhexaadka ah ee Dhex-dhexaadka ah wuxuu ka samaysan yahay dharka dhogorta ah ee HDPE, wuxuu labada dhinacba ku daboolay qalab LDPE ah, afarta gees ee kuleylka ayaa lagu xiray silsiladda PP-ga. Grommets-ka Aluminium ee udhexeeya geesaha afarta gees waxaa lagu xoojin karaa baararka caagga ah.
Dhar jilicsan oo la daweeyay ayaa ah mid aad u waara isla markaana xadhkaha xargaha leh ee grommets-ka xakameysan ayaa xaqiijinaya wax soosaarka heerka dhismaha. UV lagu daaweeyaa sidoo kale waa la heli karaa si tuubbadu u sii waarto.
Miisaan 90-140 gsm
Cabbirka 6 '* 8' / 8 '* 8' / 8 '* 10' Max illaa 100 '* 100'
1. Qayb kasta oo kuxiran boorsada 'poly poly' oo ay ku jirto sumad la galiyay
Hore: Nambarka Nalalka Dhibanaha Nalka
Xiga: Heerka Labaad ee Hawlgalka culus